Tungsten Heavy Alloys - Luoyang yakabva yanyatsobatana Tungsten-Molybdenum Material Co., Ltd.
High arambe achirema, chakanakisisa formability uye machinability, hunoshamisa ngura nemishonga, mukuru modulus pamusoro elasticity, zvinoorora chafariz conductivity uye pasi chafariz kuwedzera. Ratinoparidza: yedu tungsten weheavy metal alloys.
"Heavyweights" Our anoshandiswa Somuenzaniso, muna avhiyesheni uye Aerospace Mazinga, rwokurapa, kuti motokari uye foundry Mazinga kana kuti mafuta uye gasi kuchera. Takurukura muchidimbu varipo zvitatu izvi pazasi:
Our tungsten weheavy metal alloys W-Ni-Fe uye W-Ni-Cũ vane zvikuru yakakwirira arambe achirema (17.0 kusvika 18.8 g / cm3) uye anopa yakavimbika kudzivirirwa pamusoro X-ray uye wegamma nemwaranzi. Both W-Ni-Fe uye dzedu dzisiri rinobva zvinhu W-Ni-Cũ inoshandiswa kudzivirirwa somuenzaniso mune zvokurapa kushanda asiwo mafuta uye gasi indasitiri. Sezvo collimators mu nemwaranzi kurapa midziyo ivo nechokwadi yakarurama chokupfeka. In vakadengezera Zviidzo isu vangashandisa zvikuru yakakwirira arambe achirema kwedu tungsten weheavy metal chiwanikwa. W-Ni-Fe uye W-Ni-Cũ vawedzere chete shoma panguva dzakakwirira tembiricha kupera kupisa zvikuru kwazvo. Sezvo chakuvhuvhu inoisa kuti aruminiyamu foundry basa, vanogona kakawanda neshungu uye dzaserera pasina kuva haungatani kuputsika.
Mugore Electrical buditsa machine (EDM) muitiro, simbi dziri machine psac zvakapfuuridza padanho zvakarurama pachishandiswa nemagetsi discharges pakati workpiece uye electrode. Kana mhangura uye graphite electrodes havasi kusvikira basa, kupfeka nemishonga tungsten-copper- electrodes vanokwanisa muchina kunyange nesimbi zvakaoma pasina dambudziko. In yeplasma pfapfaidzo mokugezera nokuda unhani indasitiri, zvokunyama zvivako zviri tungsten uye mhangura zvakare mukwanisi mumwe nomumwe zvakakwana.
Infiltrated esimbi tungsten inorema simbi ine mbiri zvinhu zvinoriumba. Mumakore maviri mudariro kugadzira muitiro, munhu porous sintered chawo ari kutanga anogadzirwa kubva chezvinonhuwira pamwe rokumusoro utsotso pfungwa Somuenzaniso imwe refractory simbi, pamberi akazaruka pores vari ipapo infiltrated pamwe liquified pakuderedza pamwe rezasi utsotso pfungwa. The ehupfumi wacho zvinoriumba kuramba kuchinja. Kana iongororwe pasi maikorosikopu, Zvivako nerimwe zvakamisa hurongwa kuramba kuva pachena. Zvisinei, panguva macroscopic sandara, pakati ehupfumi wacho zvinoriumba ikashandiswa. Somunhu vakaberekwa esimbi zvinhu, zvinhu zvitsva anogona Somuenzaniso, nhaka chafariz conductivity itsva uye chafariz kuwedzera tsika.
Liquid danho-sintered tungsten-inorema nesimbi anogadzirwa kubva musanganiswa simbi Nezvakakuyiwa mune rimwe-padanho kugadzirwa mutoo panguva iyo hurongwa hwakaderera utsotso pfungwa dziri yakarukutika pana avo vane dzakakwirira utsotso pfungwa. Panguva bhainda danho, zvinoriumba izvi zvinoumba alloys nevaya vane yepamusoro utsotso pfungwa. Kunyange yakawanda ari tungsten, iro rine yakakwirira utsotso pfungwa, unoparara panguva bhainda danho. Plansee kwakaita mvura danho sintered rinoumba zvokuvakisa vanobatsirwa tungsten chazvo kuti arambe achirema, modulus pakati elasticity uye kwaniso yekubata X-ray uye wegamma nemwaranzi pasina kutambura chero zvainovhiringidzawo chokuita kubudiswa yakaisvonaka tungsten Asi coefficient pakati chafariz kuwedzera uye chafariz uye zvemagetsi conductivity nemvura kutotanga-sintered zvinoriumba kuvimba kuti yakakura kwazvo pamusoro murwiyo rinobatanidzwa bhainda Pasika.
Back-vachikanda zvinhu panguva nokubatanidza zvinhu ehupfumi maviri akasiyana zvinhu zvinoriumba. Panguva iyi, zvinhu pachavo izvo zvichachengetwawo mu hwepakutanga uye vakasungwa chete panguva mutete Junction. The simbi dziri fused mune Foroma yokuumba chisungo micrometers vashomanana kukura. Kusiyana nomoto uye pokunamatidza unyanzvi, nzira iri kunyanya kugadzikana uye kunovimbisa optimum chafariz conduction.